सम्पादकद्वारा त्यो समाचारको सहादत - China Radio International
(GMT+08:00) 2017-01-11 11:10:39
विभिन्न साप्ताहिक पत्रिका तथा म्यागेजिनहरुमा काम गरेर म 2057 सालमा नयाँ सडक दैनिक पुगेँ। गर्मी महिनाको समय थियो। बागबजारमा पिके क्याम्पसको अगाडि भक्तपुर जु जु धौ (दही पसल) थियो। त्यहाँ पिके क्याम्पस पढ्ने छात्राहरुको भीड थियो। मलाई दही खान मन लागेको थियो। पसलले उनीहरुलाई प्राथमिकता दिँदोरहेछ। निकैबेरपछि छात्राहरु गुरुरु कलेजभित्र छिरे। पसल सुनसान भयो। म गफ गर्न थालेँ। पिकेकै छात्राहरुले गर्दा व्यापार राम्रो चलेको रहेछ। पसलेका अनुसार उनले त्यो पसलबाट नचिताएको पैसा कमाइरहेका थिए। तर कुनै कुनै छात्राले चाहिँ दही खाएर पैसा नदिने र फोन गरेको शुल्क पनि नतिर्ने गरेको गुनासो पसलेले सुनाए। कुरै कुरामा उनले पिके क्याम्पसका छात्राहरुले उनको पसलमा आएर विभिन्न व्यक्तिलाई दैनिक ब्लफकल गर्ने गरेको सुनाउँदै भने 'यो पसलको माथिल्लो तलामा कम्प्युटर सिकाइन्थ्यो। त्यो सरेपछि कोठा खाली थियो। घरबेटीले ताल्चा लगाएको रहेनछ। एकपटक त एउटी छात्रा र एक युवक त्यहाँ आपत्तिजनक अवस्थामा फेला परे।'
उनको कुरा सुनेपछि मैले एउटा फिचर बनाउने बिचार गरेँ। यसका लागि पसलेसँग अनुमति मागेँ। उनले अनुमति दिँदै भने 'नाम चाहिँ उल्लेख नगर्नुहोला। फेरि पिकेका केटीहरु आएर बबाल गर्छन्।'
भोलिपल्ट नयाँ सडक दैनिकको तेस्रो पृष्ठमा 'नाम नछाप्नोस् है पिकेका केटी आएर बबाल गर्छन्' शीर्षकमा एउटा फिचर छापियो। त्यो समाचारको मुख्य विषय चाहिँ बागबजारका अधिकांश कस्मेटिक पसल, पुस्तक तथा स्टेसनरी पसल, खाजा पसल र कफी पसलका मुख्य ग्राहक पिके क्याम्पसका छात्रा हुन् भन्ने थियो। समाचारमा मैले अलिकति ध्यान नदिँदा त्यो दही पसल नै बन्द हुन गयो। मैले ती पसलेको नाम त प्रकाशन गरिन तर 'बागबजारका एकजना दही पसले भन्छन्' वाक्यांश उल्लेख भएछ। बागबजारमा त्यही एउटा मात्र दही पसल रहेछ। त्यसपछि त के चाहियो र समाचार साँचो भए पनि पिके क्याम्पसका छात्राहरुले दही पसललाई बन्द गराएरै छोडे। यता नयाँ सडक दैनिकको अफिसमा एकहप्तासम्म हुल बाँधेर छात्राहरु आउन थाले।
नयाँसडक दैनिकमा काम गर्दाको अर्को अनुभव पनि उत्तिकै सान्दर्भिक छ। एकजना मान्छेले एउटा समाचार लेखेर अफिसमा आए। समाचारको विषय उच्च माध्यमिक शिक्षा परिषदमा भइरहेको आर्थिक अनियमिता र नाता कुटुम्बलाई जागिर लगाइएको थियो। तर समाचार एकपक्षीय थियो। त्यसमा समाचारका तत्वहरु अपूरा थिए। एक किसिमको निबन्ध जस्तो थियो। मैले त्यो छाप्न नसक्ने बताएँ। उनले मलाई प्रकाशन गर्न निकै अनुरोध गरे। पाठक पत्र लेखेमा प्रकाशन हुनसक्छ भन्ने सुझाव उनलाई दिएँ। उनले त्यसैलाई पाठकपत्रको रुपमा प्रकाशन गरिदन अनुरोध गरे। त्यो अत्यन्त लामो र घुमाउरो भयो। छोटो र सटिक लेखेर फ्याक्स गर्नु भएमा छाप्न सक्ने बताएँ। उनी उच्च माध्यमिक शिक्षा परिषदमै काम गर्ने कर्मचारी रहेछन्। उनले आफ्नो नाम गोप्य राख्ने बताएपछि कुनै एउटा काल्पनिक नामबाट फ्याक्स पठाउन मैले उनलाई आग्रह गरेँ।
उनले भोलिपल्ट बिहानै फ्याक्स पठाएछन्। सायद कार्यालयमा कोही आइनपुगेको अवस्थामा उनले हतार हतार फ्याक्स पठाएको हुन सक्छ। मैले त्यसलाई पाठक पत्रमा राखेँ। जब पत्रिकामा त्यो पाठकपत्र प्रकाशन भयो। दिउँसो हुल बाँधेर उच्च माध्यमिक शिक्षा परिषदका सबैजसो कर्मचारीहरु गाडी नै लिएर नयाँसडक दैनिकको कार्यालयमा आए। हुँदै नभएको समाचार किन छापेको तपाईंसँग के प्रमाण छ जस्ता कुरा उनीहरुले तेर्स्याए। यो समाचार नभएर पाठक पत्र हो र यो तपाईंहरुकै फ्याक्सबाट आएको छ भनेर मैले उताबाट पठाएको फ्याक्स देखाएँ। तर उनीहरु त्यतातिर लाग्दै लागेनन्। नयाँ सडक मुर्दाबाद, मानमर्दन बन्द गर, आरोप लगाउन पाइन्न भन्दै उनीहरु नारा लगाउन थाले। नारा लगाउनेमा सबैभन्दा धेरै कराउने र हल्ला गर्ने व्यक्ति दुई दिन अगाडि समाचार लिएर आउने थिए। मैले उनलाई हेरेर हाँसे। उनी कालोनिलो भए। आफ्ना हाकिमहरुको सामुन्ने पानीमाथिको ओभानो हुन खोजिरहेका थिए उनी। मलाई भने फ्याक्स हेरेर उनको हस्तलिखतबाट पत्ता लगाउँछन् कि भन्ने डर थियो। किनभने उनी समाचार दिन आएका थिए र त्यो पाठकपत्र भए पनि मेरै सुझावमा उनले लेखेका थिए। उनलाई जोगाउनु मेरो कर्तव्य थियो।
अन्तत उनीहरुलाई त्यो पत्रको खन्डन लेख्न मैले सुझाव दिएँ। उनीहरुले लेखे। तर, उनीहरुले फेरि अर्को अत्तो थापे पहिलो पृष्ठमा छापिनुपर्ने। अरे बाबा, पाठकपत्रको प्रतिक्रिया स्वरुप अर्को पाठकपत्र कसरी पहिलो पृष्ठमा प्रकाशन हुन्छ? यो त पाठक पत्र छापिने ठाउँमै हुन्छ। उनीहरु टिमुर्किँदै फर्किए। त्यही दिन उनीहरुले उच्च माध्यमिक शिक्षा परिषदको गेटमा 'नयाँ सडक दैनिक पत्रिकाका पत्रकारलाई प्रवेश निशेध' लेखेछन्।
म 2058 सालमा म नयाँसडकपछि गोरखापत्रमा काम गर्न थालेँ। म गोरखापत्रको उपत्यका रिपोर्टरको रुपमा कार्यरत थिएँ। एक दिन बाइकमा मैतीदेवीबाट पुतली सडक जाँदै गर्दा डिल्लीबजारको कन्या क्याम्पस अगाडि एकजना व्यक्तिले बाटोमा उभिएर माग्दै गरेको देखेँ। यसो हेरेँ। माग्नैपर्ने जस्तो त लागेन। बाइक साइट लगाएर हेर्न थालेँ। ऊ म भएको ठाउँमा पनि आइपुग्यो र एउटा कागज देखाउँदै मसँग पनि पैसा माग्न थाल्यो। मैले कागज हेरेँ। त्यहाँ त डाक्टरले उसलाई एचआईभी एड्स भएको भनेर सिफारिस गरेको रहेछ।
कागजदेखेपछि मलाई कौतुहल जाग्यो। उसलाई मैले गोरखापत्रमा काम गर्छु भनेर परिचय दिएँ। उसलाई पनि संचारको महत्व राम्ररी थाहा रहेछ। उसले भन्यो 'सर मेरो कहानी तपाईंको पत्रिकामा छापिदिनुहोस्। कमसेकम त्यो पढेर अरुलाई एड्स नलागोस्।'
उसले आफ्नो सबै कहानी मलाई बतायो। ऊ डिल्लीबजारकै रैथाने व्यक्ति रहेछ। लागू पर्दाथको दुर्व्यसनी हुँदै केटाहरुसँग एउटै सिरिन्ज प्रयोग गर्दा आफूलाई एचआईभी एड्स भएको उसले बतायो। लगभग 35 वर्षको ऊ एड्ससँगै टिभी र अन्य रोड लागेर 50 वर्षको जस्तो देखिन्थ्यो। उसलाई एचआइभी एन्टी भाइरल प्रयोग गर्नका लागि र जीवन धान्नका लागि पैसा चाहिएर दैनिक त्यसरी माग्दोरहेछ। उसले भन्यो 'मैले अहिलेसम्म कुनै पत्रकार भेटेको थिइँन। तपाईंलाई भेटेँ। कृपया मेरो कुरालाई राम्ररी लेखिदिनुहोस् अनि युवा पुस्तालाई मजस्तो कुबाटोमा लाग्नबाट बचाउनुहोस्।'
मलाई उसको कुरा मन पर्‍यो। मैले उसका विगतका सबै कुरा सुने। अनि समाचारमा उसको सक्कली नाम राख्न मिल्छ भनेर प्रश्न गरेँ। उसले भन्यो 'ल किन मिल्दैन। म यहाँ सार्वजनिक ठाउँमा बसेर डाक्टरको सिफारिस देखाएर सबैलाई भनिरहेको छु। तपाईसँग क्यामरा भएमा मेरो फोटो पनि छाप्नु भयो भने अझै राम्रो हुन्छ। मैले लुकाउने कुरा केही छैन। म अब धेरै बाँच्दा पनि बाँच्दिन। मर्ने बेलामा अरुलाई केही सल्लाह दिन चाहन्छु।'
उसको कुरा मलाई राम्रै लाग्यो। तै पनि उसको परिचय खुलाएर फोटो सहित छाप्दा कतै उसको परिवारलाई आघात पर्ने हो कि भनेर सोधेँ। उसले भन्यो 'मेरा परिवारका सदस्यहरुले धेरै अगाडि नै मलाई त्यागिसके। म मेरा परिवारको नाम चाहिँ भन्न चाहन्न।' उसलाई त्यतै बस्दै गर्न भनेर म कोठामा फर्किएँ र क्यामेरा लिएर गएँ। त्यतिखेर डिजिटल क्यामरा फाट्टफुट्ट आइसकेको थियो। तर धेरै महङ्गो हुनाले हामीजस्ता सर्वसाधारणका लागि त्यो हाउगुजी नै थियो। मैले चाहिँ आफ्नो समाचारलाई सशक्त बनाउनका लागि कोठामा भएको सामान्य क्यामराम नयाँ रिल लोड गरेँ। बाइक हुँइक्याउँदै डिल्लीबजार पुग्दा उसरी नै पैसा मागिरहेको थियो।
मैले उसका केही फोटा खिचेँ। त्यतिबेला त फोटो खिच्दा पनि निकै कन्जुस्याइँ गर्नुपर्थ्यो। मैले लगभग चारपाँचवटा फोटो खिचेँ। अनि न्युरोड गएर फोटो धुलाएँ। समाचार तयार बनाएँ र समाचार कक्षमा बुझाएँ। त्यतिबेला उपत्यकाका समाचार हेर्ने काम आनन्दराम आचार्यले गर्नुहुन्थ्यो। मैले उहाँलाई भनेर नै समाचार दिएको थिएँ। उहाँ कुन धुनमा हुनुहुन्थ्यो। त्यति वास्ता गर्नु भएन। म आफ्नो काममा लागेँ।
भोलिपल्ट एंकर न्युजको रुपमा समाचार त प्रकाशित भयो तर सबै भद्रगोल भएछ। कुरा के भएछ भने राति समाचार छापिने बेलामा डेक्समा त्यसको चर्चा भएछ। अनि त्यो एड्सवालाको नाम परिवर्तन गरिएछ। ठेगाना पनि परिवर्तन गरिएछ र फोटो पनि राखिएनछ। मैले आनन्दराम दाइलाई किन त्यसरी परिवर्तन गर्नुभयो भनेको उहाँले भन्नुभयो 'पत्रकारिता आचार संहिता अनुसार पीडितको नाम र ठेगाना खुलाउनु हुँदैन तपाईंले फोटो सहित पो ल्याउनु भएछ।' मैले अघिल्लो दिन उहाँलाई सबै कुरा भनेरै समाचार दिएको थिएँ। पीडितको अनुमति मात्र होइन फोटो आवोस् भन्ने पूरा इच्छा भएकाले मैले व्यक्तिगत खर्चमा त्यसरी फोटो खिचेको थिएँ। तर उहाँले मैले भनेको कुरा वास्ता गर्नु भएको थिएन। अथवा बिर्सनु भयो।
समाचार छापिएपछि त्यो व्यक्तिले मलाई कोठामा फोन गरेर किन यस्तो बिगार्नुभयो भनेर गुनासो गर्‍यो। मैले उसलाई पत्रकारिताको धर्मले दिएन तपाईको फोटो र नाम छाप्न भनेर सम्झाउन खोजेँ। तर उसले चित्त बुझाएन।
गोरखापत्रमा काम गर्दा नै मैले एउटा निकै महत्वपूर्ण समाचार तयार बनाएँ। त्रिभुवन विश्वविद्यालयको जमलस्थित (विश्वज्योति हल पछाडि) जग्गा मिचेर रुप ज्योतिले घर बनाएका रहेछन्। त्रिविले सर्वोच्चमा रिट हालेपछि अदालतले उक्त घर भत्काउन आदेश दिएछ। रुप ज्योति त्यतिबेला राजाबाट मनोनित राष्ट्रिय सभाका सदस्य थिए। उनले शक्तिको दुरुपयोग गर्दै अदालतको निर्यणको अपहेलना गरेको कुरा मलाई त्रिविका कानुन अधिकृत नारायण खनालले बताएका थिए। उनले मलाई समाचार प्रमाणका रुपमा लाजपूर्जाको फोटोकपि र अदालतको निर्णय आदेशको फोटो कपि पनि दिएका थिए। मैले सोचेँ यो त निकै महत्वपूर्ण समाचार हुन्छ।
मैले समाचार आनन्द दाइलाई दिएको थिएँ। भोलिपल्ट पत्रिकामा समाचार छापिएन। कार्यालय पुगेपछि मलाई आनन्द दाइले सम्पादकलाई भेट्नुपर्ने बताउनुभयो। त्यतिबेला गोरखापत्रमा प्रधानसम्पादक र महाप्रवन्धक दुवै शक्तिशाली पदमा किशोर नेपाल हुनुहुन्थ्यो। म उहाँको कार्यकक्षमा गएँ। त्यहाँ गोरखापत्रका अन्य वरिष्ठ व्यक्तिहरु पनि हुनुहुँदोरहेछ। किशोर नेपालले मलाई भन्नुभयो 'तपाईंले त मेरो जागिर नै झन्डै खुस्काइदिनु भएछ। धन्न आनन्दले मलाई समाचार देखाएको हुनाले मैले रोकेँ। रुप ज्योति को हो थाहा छ? यो गोरखापत्रलाई सुहाउने समाचार होइन। हामी राजा र सरकारसँग पौँठेजोरी खेल्न आएका होइनौँ। आइन्दा यस्तो समाचार नलेख्नू।'
म किशोर नेपालको कुरा सुनेर छक्क परेँ। किनभने नयाँ सडक पत्रिकामा पनि मैले उहाँकै नेतृत्वमा काम गरेको थिएँ। उहाँले मलाई निश्पक्ष र व्यावसायिक रुपमा काम गर्न सधैँ उत्प्रेरणा दिनुहुन्थ्यो। राजनीतिक शक्तिसँग पत्रकारिता कहिल्यै पनि झुक्नुहुन्न भन्नुहुन्थ्यो। त्यसमाथि अदालतले निर्णय गरिसकेको समाचारलाई उहाँले किल गर्नुभयो।
मैले नेपालमा 16 वर्ष पत्रकारिता गर्दा भोगेका आचार संहितासम्बन्धी केही उदाहरण हुन् उल्लिखित चारवटा घटना। पहिलो समाचारमा मैले सावधानी नअपनाउँदा एकजना व्यवसायीले बागबजारबाट भाग्नुपर्‍यो। दोस्रो घटनामा यदि मैले पाठकपत्र लेख्ने मान्छे औँल्याइदिएको भए उच्च मावि शिक्षा परिषदका एकजना कर्मचारीले जागिर छोड्नेसम्मको समस्या हुन सक्थ्यो। तेस्रो घटनामा पीडितको नाम र ठेगाना तथा फोटो नछाप्दा समाचार निकै कमजोर भयो। जहाँ पीडितले नै फोटो छापिदिनु भनेका थिए। तर यो समाचारमा डेक्सले त्यति गल्ती गरेको मानिदैन। भूलबस नाम र ठेगाना छाप्नुभन्दा भूलबस नछापेकै राम्रो हो। कमसेकम कसैलाई थप पीडा नपुगोस् भन्ने पत्रकारिताको सिद्धान्तै हो।
तर चौथो समाचारमा गम्भीर रुपमा आचारसंहिता उल्लङ्घन भयो। शक्तिको आडमा सत्यतथ्य लुकाउने काम पत्रकारितामा अक्षम्य हो। यसै त गोरखापत्र त्यसमाथि राजाको शासनकाल ! मैले त्यतिबेला सम्झे सत्यतथ्य र व्यावसायिकता त पद र अवसर नपाउँदा मात्र रहेछ। आखिर वरिष्ठ भनाउँदाहरु नै शक्तिसँग स्वतन्त्र पत्रकारिताको सौदा गर्दा रहेछन्।
अहिले म बेइजिङस्थित चिनियाँ अन्तर्राष्ट्रिय रेडियोको नेपाली सेवामा विदेशी विशेषज्ञका रुपमा कार्यरत छु। चीनमा पत्रकारिता गर्दा पाएको अनुभवले मलाई के सिकाएको छ भने नेपाली पत्रकारिताले हतारमा धेरै गल्ती गरिरहेको छ। ब्रेकिङ न्युजका नाममा हामी काष्ठमन्डप एयरलाइन्सलाई तारा एयरलाइन्स बनाउँछौँ। प्रधानसेनापतिलाई प्रधानमन्त्री भनेर क्याप्सन लेख्छौँ। अनि विदेशी राजकुमारलाई राजदूत भन्न पनि पछि पर्दैनौँ। हतार गर्दा र समाचार श्रोतलाई राम्ररी ख्याल नगर्दा नेपाली पत्रकारितामा थुप्रै अनुजा बानिया जन्मन्छन् र थुप्रै रसेन्द्र भट्टराईहरु उदाउँछन्।
नेपाली संचारमाध्यमको मुख्य समस्या भनेको नै अर्को संचारमाध्यमबाट लिइएको समाचारको श्रोत उल्लेख नगर्ने अथवा क्रेडिट नदिने परम्परा हो। एजेन्सीबाट लिइएको समाचार बाहेक अन्य संचारमाध्यमबाट समाचार लिएको रहेछ भने पनि आफ्नै बनाएर प्रस्तुत गर्ने सैली नेपालमा निकै जमेको छ। अर्को संचारमाध्यमको समाचार लिएर उसलाई उद्धृत गर्दा आफू तल परिन्छ भन्ने इगो नेपाली संचार जगतमा छ भने पाठक, श्रोता तथा दर्शक सामु आफ्नो विश्वसनीयता घुम्छ भने गलत बुझाइ रहेको छ। तर चिनियाँ संचारमाध्यममा यसको ठीक उल्टो प्रचलन रहेको छ। यहाँका ठूला संचारमाध्यमले समाचार लिँदा स्थानीय संचार माध्यमलाई उद्धृत गर्दै समाचार सम्प्रेषण गरिरहेका हुन्छन्। चीनकै राष्ट्रियस्तरमा अथवा कतिपय अन्तर्राष्ट्रिय चर्चामा रहेका चीनका ठूला नेतामाथिको भ्रष्टाचारको कारवाहीसम्बन्धी समाचारपनि स्थानीय संचारमाध्यममा आइसकेपछि राष्ट्रिय ठूला दैनिक पत्रिकाले मुख्य समाचार बनाएका थुप्रै उदाहरण छन्। यहाँ चाइना डेली पत्रिकाले त्यसो गरेको केही उदाहरण राख्न चाहन्छु।
2015 जनवरी 15 बिहीबारको चाइना डेलीको पृष्ठ5मा चिनियाँ कम्युनिष्ट पार्टीका पूर्व पोलेट ब्युरो सदस्य चौ योङखाङको भ्रष्टाचारको मुद्दामा पहिले नै भ्रष्टाचारको मुद्दामा जेल परिसेका अर्का नेता पो सिलाई (नेपालीमा बो सिलाई) सँग सम्बन्ध थियो भन्ने समाचार प्रकाशन भएको छ। तर यो समाचार पत्रिकाले हङकङको फोनिङ साप्ताहिक म्यागेजिन र हङकङकै फोनिक्स टेलिभिजनलाई उद्धृत गर्दै लेखेको छ।
चौ योङखाङमाथिको कारवाही चीनमा मात्र नभएर अन्तर्राष्ट्रिय चर्चाको विषय थियो। त्यस्तो अवस्थामा राष्ट्रको सरकारी ठूलो बहुभाषिक पत्रिकाले हङकङको साप्ताहिक पत्रिका र टेलिभिजनमा आइसकेका समाचारलाई उद्धृत गरेर जिम्मेवारीपूर्वक समाचार सम्प्रेषण गरेको छ। राजधानीबाट प्रकाशन हुने पत्रिकाले राष्ट्रिय महत्वको घटनासँग सम्बन्धित समाचार पनि अर्को प्रान्तबाट प्रकाशित पत्रिका र टेलिभिजनलाई उद्धृत गरेको छ। नेपालमा भए के यसो गरिन्थ्यो? समाचार तानतुन बनाए पनि त्यस्ता मोफलसका संचारलाई उद्धृत गर्नु नेपालका कुनै पनि सचारमाध्यमले अहिलेसम्म नगरेको कुरा हो।
त्यसैगरी 2015 जनवरी7बुधबार प्रकाशित चाइना डेलीको चौथो पृष्ठमा च्याङ्सु प्रान्तका याङ वइचमाथि भ्रष्टाचार गरेको भनी कारवाही सुरु भएको समाचार छ। सो समाचारको श्रोतका रुपमा बेइजिङ युथ डेलीलाई उद्धृत गरिएको छ। त्यसैगरी सोही पृष्ठमा प्रकाशित अर्को समाचारमा चीनको पहिलो तहमा आउने निर्माण कम्पनी चच्याङ क्वाङसा कम्पनीमाथि कारवाही गरिएको समाचार छ। यो समाचार पनि द पेपर डट कममा आइसकेको हुनाले त्यसैलाई उद्धृत गर्दै चाइना डेलीले प्रवाह गरेको छ।
चीनमा अहिले भ्रष्टाचारको समाचारलाई निकै प्राथमिकता दिइएको छ। सरकारको भष्टाचार विरुद्धको अभियानलाई संचारमाध्यमले पनि पूर्ण साथ दिएको छ। यस्तो अवस्थामा विभिन्न प्रान्तमा भएका भ्रष्टाचार विरुद्धका अपरेसनहरुलाई पत्रपत्रिकाले समाचार बनाएका छन्। जसले पहिले बनायो सो समाचारलाई पछि बनाउनेहरुले उद्धृत गरेकै छन्।
भित्री पृष्ठमा मात्र होइन प्रथम पृष्ठको मुख्य समाचार नै अन्य संचार माध्यममा आइसकेको भनी श्रोत उल्लेख गरेर राख्दा चाइना डेलीको इज्जत बढेकै छ। विभिन्न कम्पनीमा हुने ठूला भ्रष्टाचारको बारेमा 2015 फेब्रुअरी 10 मंगलबारको चाइना डेलीको प्रथम पृष्ठमा शीर्ष समाचार प्रकाशन भएको छ। उक्त समाचारको श्रोतमा बेइजिङकै क्वाङमिङ दैनिकको समाचारलाई उद्धृत गरिएको छ। सोही समाचारमा अन्य संचार संस्थालाई पनि उद्धृत गरिएको छ। त्यसरी उद्धृत गरिएका अन्य संचार संस्थाहरुमा चच्याङ प्रान्तको एक अनलाइन संचारमाध्यम हाइ थिङ्क रोयाल फ्लस इन्फर्मेसन नेटवर्क रहेको छ।
पत्रकारिताको विश्वव्यापी आचारसंहितामा एकअर्कामा सहकार्य गर्ने र अर्को संचारमाध्यमको समाचार उद्धृत गरेर मात्र राख्नुपर्ने प्रावधान छ। तर नेपालमा चाहिँ सकारात्मक समाचार आफ्नै जस्तो बनाएर राख्ने र नकारात्मक समाचार अथवा आलोचना र टिप्पणी गरेर हिलो छ्याप्ने काममा चाहिँ नामै उल्लेख गरेर लेख्ने प्रचलन छ।
चाइना डेलीकै 2015 मार्च 17 मंगलबारको अङ्कमा प्रथम पृष्ठमा छापिएको समाचारको श्रोतको रुपमा छाइचिङ डट कम डट सिएनलाई उद्धृत गरिएछ। 2015 मार्च 18 बुधबारको चाइना डेलीको तेस्रो पृष्ठमा प्रकाशित भ्रष्टाचारमा चच्याङका नेतामाथिको छानबिनको समाचार रहेको छ। सो समाचार छाइसिन म्यागेजिनबाट लिइएको समाचारको पहिलो अनुच्छेदमै उल्लेख छ।
2015 अप्रिल2बिहीबारको चाइना डेलीको पाँचौँ पृष्ठको मुख्य समाचारमा भ्रष्ट व्यक्ति तथा उनीहरुको परिवारबाट 38 करोड 70 लाख अमेरिकी डलर घुस खाएको आरोपमा कारवाही सुरु भएको समाचार छ। यति महत्वपूर्ण समाचार नेपालका सचार माध्यममा भएदेखि ब्रेकिङ न्युज भनेर आउँथ्यो होला तर चाइना डेलीले छाइचिङ म्यागेजिनबाट सो समाचार लिएको कुरा सर्गव उद्धृत गरेको छ।
चाइना डेलीका उल्लिखित प्रसङ्गबाट नेपाली संचारमाध्यमले सकारात्मक पाठ लिनसक्नुपर्छ। एउटै संचारमाध्यमका पत्रकारहरुले सबैतिर भ्याउने कुरा हुँदैन। स्थानीय स्तरबाट प्रकाशित हुने पत्रपत्रिकाले त्यहाँका मुद्दा उठाइरहेका हुन्छन्। ती कुराहरु राष्ट्रिय स्तरकै महत्व राख्ने पनि हुनसक्छन्। त्यतिबेला मोफसलबाट प्रकाशित समाचारलाई राजधानीका मेनस्ट्रिम भनाउँदाहरुले उद्धृत गरेर त्यस्ता समाचारलाई विस्तार गर्दा राम्रो हुन्छ।
चिनियाँ संचारमाध्यमको अर्को उदाहरण पनि हाम्रा लागि महत्वपूर्ण हुनसक्छ। सीसीटीभीका थुप्रै च्यानलहरुमध्ये च्यानल 12 चिनियाँ समाज र कानुनको हो। यसले चीनमा भइरहेका सामाजिक अपराधका घटनालाई प्रसारण गर्ने गर्छ। चोरी, ठगी, डकैती लगायतका अपराधमा प्रहरीले पक्रिएका व्यक्तिको बयान र अन्तर्वार्ता प्रसारण गरिन्छ। यसरी प्रसारण गर्दा अपराधीको परिचय र अनुहार देखाइँदैन। अदालतले अन्तिम फैसला नगरिकन कुनै पनि व्यक्तिलाई अपराधी मान्नु हुँदैन भन्ने मान्यतालाई आत्मसात गरी उनीहरुको नाम, ठेगाना र अन्य पहिचानलाई गोप्य राखिएको हो। जब अदालतले निर्णय गर्छ अनि मात्र उसको पहिचान देखाइन्छ।
सीसीटीभीबाट प्रसारित महिला हिंसामा पीडित महिलालाई स्टुडियोमा बोलाएर उनीहरुको समस्या भन्न लगाइन्छ। तर उनीहरुलाई हिन्दी चलचित्र क्रिसमा रितिक रोसनले लगाएको जस्तो माक्स लगाउन दिइन्छ। यसो गरेपछि निर्धक्कसँग उनीहरुले आफ्ना समस्या राख्न सक्छन्। आफ्नो अनुहार कसैले चिन्दैन भन्ने थाहा पाएर उनीहरुमा आँट आउँछ भने पछि अनुहार ब्लयर गरिरहनु पर्ने सम्पादनको समस्या पनि पर्दैन।
रेडियोको कार्यक्रममा अथवा पत्रिकाका लागि कसैसँग कुरा गर्नुपर्‍यो भने शिष्टतापूर्वक अनुमति मागिन्छ। यदि उनीहरुको अनुमति छैन भने त्यसलाई समाचार बनाइँदैन। फोटो खिच्दा पनि त्यही पद्धत्ति अपनाइन्छ। तर नेपालका संचारमाध्यमले लाशका अगाडि चित्कार गरिरहेका आफन्तको फोटो र दृश्य खिच्न कहिल्यै अनुमति मागेको थाहा छैन। हामी त अरुको वेदना बेचेर आफू लोकप्रिय हुने माध्यम खोजिरहेका हुन्छौँ।
कोही व्यक्तिले संचारमाध्यमलाई कुनै कुरा भन्छ तर आफ्नो पहिचान गोप्य राख्न चाहन्छ भने त्यसलाई चिनियाँ संचारमाध्यमले यसरी प्रयोग गर्छ 'बेइजिङकी चाङ थरकी एकजना महिला यसो भन्छिन'। बेइजिङमा झन्डै साढे चार करोड मानिस बस्छन्। त्यसमा चाङ थर भएका मानिसको संख्या चीनमै अधिक मानिन्छ। यसो गरेपछि सम्बन्धित व्यक्तिको भनाइ पनि संचारमाध्यममा आयो र उसको इच्छा अनुसार पहिचान पनि गोप्य राखियो।
तीन करोड जनसंख्या पनि नभएको नेपालमा हामी नाम परिवर्तन गरेपनि अरु सबै कुरा खुलाउँछौँ। अनि 'बागबजारको एक दही पसेलका अनुसार' भनेजस्तो हुन्छ। पत्रकारलाई बागबजारम कतिवटा दही पसलहरु छन् भन्ने कुरा पनि हेक्का हुनुपर्ने रहेछ। नेपालमा प्रहरीले समाउनासाथ साँच्चै अपराधीजस्तो गरेर उसलाई बारम्बार देखाइन्छ। चीनमा सानोतिनो अपराध गरेको व्यक्तिको पहिचान अपराध प्रमाणित हुँदा पनि खुलाइँदैन किनभने जेल भनेको सुधार गृह हो। उसले भोलि त्यही समाजमा सुध्रिएर बस्न सक्नुपर्छ भन्ने मान्यता छ।
सबैभन्दा ठूलो कुरा चिनियाँ संचारमाध्यम धैर्य हुन्छन्। सबैतिरबाट जानकारी प्राप्त नहुँदासम्म त्यसलाई हचुवाको भरमा समाचार बनाइँदैन। कमसेकम न्युज ब्रेक गर्ने नाममा असत्य र भ्रामक कुरा त सर्वसाधारणमा जाँदैन। महत्वपूर्ण समाचार आयो भने त्यसलाई धेरै ठाउँबाट पुष्टि गराइन्छ अनि मात्र सचारमाध्यमबाट प्रवाह गरिन्छ।
साभारः संहिता （प्रेस काउन्सिल नेपालको त्रैमासिक प्रकाशन）चैत्र 2072